Nanolotra Fiarovana Avy Amin’ny Fitsarana Eoropeana Ho An’ny Olona An’Arivony Ny Mpitarika Mpanohitra Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Marsa 2017 4:24 GMT
Alexey Navalny taorian'ny tsifitra loko maitso nataon'ny mpitsikera iray izay lasa nitsoaka . Sary: Instagram
Miha-malaza i Alexey Navalny, mpitarika mpikatroka miady amin'ny kolikoly, antenaina ho filoham-pirenena amin'ny taona 2018, ary angamba ilay mpitsikera an'i Vladimir Putin be vava indrindra ao Rosia. Tany am-piandohan'ity volana ity, tahaka ny nataony imbetsaka tao anatin'ny taona vitsivitsy, namoaka fanadihadiana mibaribary momba ny hosoka avo lenta nataon'ny governemanta ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly izay natsangan'i Navalny. .
Ny momba ny Praiminisitra Dmitry Medvedev no tatitra vao haingana indrindra nataon'i Navalny, izay mipetraka eo ambonin'ny tambajotra midadasiky ny fananana mifaka tsy ara-dalàna, araka ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly . Nahazo mpijery efa ho 11 tapitrisa tao amin'ny YouTube ny lahatsary fanolorana ny tatitra.
Amin'ny Alahady izao, 26 Martsa, hikarakara hetsi-panoherana manerana ny firenena manohitra ny kolikoly amin'ny ambaratongam-pitondrana ambony indrindra i Navalny. Tamin'ny fotoana nanoratana ity, nisy ny fikasana hanao fihetsiketsehana any amin'ny tanàndehibe Rosiana miisa 100, miampy roa hafa any ivelany, any Londres sy Prague. Araka ny fanamafisam-pahatongavana tao amin'ny media sosialy, mampanantena ny fahitana ny fahaiza-manaon'i Navalny amin'ny fanetsehana olona ity faran'ny herinandro ity, sy ny fitsapana hoe tonga hatraiza ny antsony ho an'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny Rosiana.
Misy ny olana amin'ity hetsika ity, na izany aza, nandà tsy hanome fahazoan-dalana amin'ny fihetsiketsehan'ny mpikatroka mikarakara ny hetsi-panoherana ao an-toerana ireo manampahefana any amin'ny ankamaroan'ny tanàndehibe Rosiana .
Mangataka fahazoan-dalana ​​mamaritra ny fotoana, ny toerana , sy ny habetsahan'ny vahoaka ny olona, kanefa nandà izany ny manampahefana ary tsy nanome safidy.
Tsy ara-dalàna izany ho an'i Navalny, ary hanao zavatra momba izany izy.
Navalny nandritra ny fampielezan-kevitra filoham-pirenena tamin'ny famoriam-bahoaka tao Kazan ny 5 Martsa 2017.
Fantaro ny “RosEvroSud” (Fitsarana Eoropeana Rosiana), ilay tetikasan'i Navalny farany, natao mba hanamorana ny antso any amin'ny Fitsarana Eoropeana Momba ny Zon'olombelona. Nanambara izy tao amin'ny lahatsoratra bilaogy tamin'ny Alarobia fa hanao ny tolotra ho an'ny olona rehetra izay hotànana amin'izao hetsi-panoherana manohitra ny kolikoly amin'ny alahady izao, izay nohizingizininy fa hetsika ara-dalàna, na dia tsy nety nanolotra safidy ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana aza ny manampahefana ao an-toerana rehefa nandà ny fanomezan-dalana.
“Raha tsy maintsy mametraka fitoriana miisa zato isika, dia ataontsika izany. Raha tsy maintsy mametraka fitoriana an'arivony isika, dia manao antso any amin'ny mpisolovava sy ny mpahay lalàna ao amin'ny Orina Mpanasoa Miady amin'ny Kolikoly ao amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, ​​ary hanoratra sy hametraka fitoriana an'arivony ,” hoy i Navalny raha nanoratra tamin'ny Alarobia.
Ity tolotra ity dia ho an'ny olona rehetra izay voasambotra, ka entina any amin'ny fitsarana, sady hampandoavina lamandy. Tsy maintsy mampiakatra ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana Rosiana aloha ny olona tsirairay (dingana mahazatra fotsiny ihany hoy Navalny ), ary ny RosEvroSud no mandray an-tanana ny sisa.
Teo aloha, nilaza ny vondrona fa efa nametraka fitoriana miisa 55 miaraka amin'ny EHCR izy ireo, nandresy tamin'ny raharaha miisa 12 tamin'izany, ary mbola eo an-dàlam-pikarakarana ny 29 hafa. Nandresy tamin'ny raharaham-pampakarana ny fitsarana tamin'izany i Navalny manokana ary nandray an'arivony euro avy amin'ny governemanta Rosiana ho fanonerana ny fahasimbana ara-maoraly sy ny fandaniana tamin'ny fitsarana .
Nanambara i Navalny raha nitanisa ny antso nahomby nataon'ny RosEvroSud tamin'ilay mpikatroka Igor Tarasov, fa tokony hahazoana onitra any amin'ny 10.000 euro ho an'ny olona tsirairay notànana tsy ara-dalàna sady ampandoavina lamandy ny fivoahana amin'io Alahady io mba hanaovana fihetsiketsehana miady amin'ny kolikoly.
“Raha hogadraina ianao, dia hahazo vola ihany koa ,” hoy izy nampanantena mivantana tao amin'ny hafatra ho an'ny mpanohana.
“Tsy misy tokony atahorana,” hoy izy nanampy. “Ireo kanosa ihany no matahotra.”